AAS Burmese | Home - Part 19
ရိုဟင်ဂျာကို မွတ်စလင်ဟုပြောင်းလိုခြင်းက ဆက်၍ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်လိုသည့်သဘောလား
ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများကို လက်ခံထားသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးအား အရေးယူကြ
ဂျီနိုဆိုဒ်တရားခံများ မကြာခင် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးရောက်ဖွယ်ရှိ
နိုင်ငံရေးအဓိက အခရာ- ရိုဟင်ဂျာ
ရခိုင်ပြည်မှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတာ ‘ချိုနဲ့လား’
by အောငျအောငျ December 22, 2018
(၁၂.၃.၂၀၁၂) နေ့ မြန်မာ့အသံကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တွေအနက် ထိပ်တန်းတင်ထားတဲ့ ကိစ္စ(၃)ရပ်ကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတို့ ဖြစ်တယ်” လို့ပြောခဲ့တာကို ပြည်သူတွေ မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေ့နေပြီထင်တယ်။ ယနေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေးဆိုတာတောင် ဘယ်ပုံစံမျိုးလဲဆိုတာ သိရခက်လောက်အောင်…
ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတွေကို လက်ခံကြိုဆိုစရာ မလို
by အောငျအောငျ December 11, 2018
ငါးပါးသီလမလုံလို့ အရှက်ဗြန်းဗြန်းကွဲရတဲ့ မြန်မာအစိုးရ
by အောငျအောငျ July 6, 2018
ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများ အဖမ်းခံရခြင်း၏ ပဟေဠိဖြစ်နေသော ပုစ္ဆာ
by အောငျအောငျ May 11, 2018
အစိုးရအတွက် option နှစ်ခု
by အောငျအောငျ May 2, 2018
အဆိပ်ပင်ကို ရေလောင်းချင်လောင်းပါ ပြည်သူကို အဆိပ်မကျွေးပါနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးမှုကို အဓိက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေကြသူများ
ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကို အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အဝကျွန်းသားရခိုင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းကို နားသောတဆင် ကြ
by အောငျအောငျ October 12, 2017
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၂ရက်) ည၈နာရီတွင် ပြည်သူလူထုအား မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူတို့အနေဖြင့် နားသောတဆင်ပြီး အောက်ပါအချက်များ ပါ မပါကို တွေးတောရန်လိုကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။ (၁) ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပြဿနာသည် နိုင်ငံတော်ပေါ်လစီ၏ မတရားမှုကြောင့် ဖြစ်လာသော ပြဿနာဖြစ်သည်။ ၁၉၆၅အထိ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု နိုင်ငံတော်က…
by အောငျအောငျ October 10, 2017
၅.၁၀.၂၀၁၇ နေ့မှစ၍ အာနန်ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကော်မတီက မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်နှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့အား လူမျိုးအမည် “မွတ်စလင်” ဖြင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းများထုတ်ပေးလျက် အာနန်အစီရင်ခံစာကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီဟု သိရသည်။ အာနန်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်မှသည် အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာထွက်လာသည်အထိ မည်သည့် ရိုဟင်ဂျာကမျှ အဆိုပါကော်မရှင်နှင့် ထိုကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာကို ပြစ်တင်ကန့်ကွက်ခဲ့သည်ဟူ၍မရှိ။ ရိုဟင်ဂျာ အားလုံးနီးပါးက အကျဉ်းစခန်းမှ လွတ်မြောက်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေလိုသဖြင့် အာနန်ကော်မရှင်တွင်…
by အောငျအောငျ June 21, 2017
မင်းပြားမြို့နယ် သံရှင်ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ဦးတင်ရွှေက တန်းစိတ်၊ စင်္ကြာ၊ လက်တော်ရီ၊ ဟာပိုင်၊ အောင်တိုင်၊ နော်နော်၊ စန်းဘလီ စသည့်ရွာများတွင် အကျဉ်းစခန်းပမာ နေရသည့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ဂုတ်သွေးစုပ်နေသည်မှာ ၄-နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်း အောင်တိုင်နေ ဦးလာလ်မီယာက ၂၁.၆.၂၀၁၇ နေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းပြားမြို့နယ် တန်းစိတ်နေ ဦးမောင်တင်မောင်က “ရဲအုပ် ဦးတင်ရွှေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုက ကမ်းကုန်နေပြီ၊ ကျွန်တော်တို့က မြို့နယ်မှူး၊…
by အောငျအောငျ June 19, 2017
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ထိုနိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသိပညာ နဲ့ နာမ်ရေးရာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုအပေါ် မူတည်နေတယ်။ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် တူညီဖို့ လိုအပ်တယ်။ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ၎င်းရဲ့မျိုးဆက်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိရင် အုပ်စုအချင်းချင်းကြား ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေ တိုးပွားလာပြီး တိုးတက်ရေးအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်လာတယ်။ လူ့အရင်းအမြစ်များမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်အားလုံးထက် ပိုပြီးအရေးပါတယ်။…
My latest piece :Rohingya live in the concentration camps of #Sittwe since State’s genocidal violence of 2012, feel… https://t.co/W9yHkZogw2
All my honorable followers! I wish to be safe all and help each other in during this hrad time facing pandemic. Per… https://t.co/5pyS7FkkC5
How can we save our lives from Covid-19 Read: https://t.co/tA9NBg4UT0